Computer သင်တန်းအသစ် (13.12.2015) ရက်နေ့မှစပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Computer သင်တန်းအသစ် (13.12.2015) ရက်နေ့မှစပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ
COMPUTER ( သင်တန်းအသစ် ) အတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ.
၄င်းအဖွဲ့အား မနက် (8း00) နာရီကနေ နေ့လည် (12း00)နာရီအထိ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။
၄င်းအဖွဲ့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးစတင်ဝယ်ယူသည့်အခါ ရွေးချယ် တတ်နိုင်စေဖို့နဲ့ ၀ယ်ယူပြီး ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် လည်းကောင်း၊
O/S နဲ့ ပါတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများနှင့် Windows O/S (xp,vista,7,8,10) စသည်တို့ကို တင်နည်းများအားလည်းကောင်း၊
O/S ရှိပြီးသည့် ကွန်ပျူတာကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန် Control panel နဲ့ ပါတ်သက်သည်များ ကိုလည်းကောင်း၊
Virus ကာကွယ်ပုံ နည်းစနစ်နှင့် Cracking နှင့် ပါသက်သည့်ဗဟုသုတများနှင့် virus သတ်နည်းများအားလည်းကောင်း၊
Internet လုံခြုံရေးနှင့်ပါတ်သက်သည် များအားလည်းကောင်း၊
Facebook & Email အသုံးပြုသူများ မိမိ၏ အကောင့်အား အလွယ်တကူ မယူနိုင်စေရန် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသင့်သည့် အသိပညာများအားလည်းကောင်း၊
search Engine ၏ သဘောတရားများနှင့် မိမိလိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အင်တာနက်မှ ရှာဖွေသည့် နည်းစနစ်များအားလည်းကောင်း
Storage server များနှင့်ပါတ်သက်သည့် ဗဟုသုတများနှင့် ကိုင်တွယ်ပုံ နည်းစနစ်များ စသည့်များစွာသော အသိပညာများနှင့် ဗဟုသုတများကို ချပြရှင်းလင်း သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Laptop & Desktop များအား ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်စေရန်နှင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်စေရန်
Hardware နှင့်ပါတ်သက်သည်များကို လက်တွေ့သင်ကြားပေးခြင်းအားလည်းကောင်း
စာစီစာရိုက်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး မသိမဖြစ်သိရမည့် program ဖြစ်ပြီး တတ်ကျွမ်းထားဖို့လိုအပ်သည့် Adobe Indesign အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်အားလည်းကောင်း
ဓါတ်ပုံပြုပြင်သည့်အခါ မသိမဖြစ် သိထား တတ်ကျွမ်းထားရမည့် Adobe Photoshop CS6 အသုံးပြုနည်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် template ဒီဇိုင်းများ ရေးဆွဲနည်းအား လည်းကောင်း
animation ပြုလုပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း resolution မြင့်သည့် ပုံများရရှိနိုင်စေရန်၊ ဖိတ်စာဒီဇိုင်းများ ရေးဆွဲရာတွင် မသိမဖြစ် သိထားရမည့် adobe Illustrator အသုံးပြုနည်း အားလည်းကောင်း
Accounting နှင့်ပါတ်သက်ပြီး စာရင်းအင်းပညာရပ်ကို တွက်ချက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် မရှိမဖြစ် တတ်ကျွမ်းထားရမည့် Microsoft Excel အား အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်အားလည်းကောင်း၊
Video တည်းဖြတ်ရာတွင် မရှိမဖြစ် တတ်ကျွမ်းထားရမည့် Adobe Premiere CS6 အသုံးပြုနည်းမှသည် DVD အခွေ ထုတ်တဲ့အဆင့်အထိ အားလည်းကောင်း၊
၄င်း course ထဲတွင် နာမည်ကြီး video တည်းဖြတ်သည့် program ဖြစ်သော Edius ကိုပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
Run box နှင့် ပါတ်သက်သော shortcut များနှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း အသေးစိတ်အားလည်းကောင်း Linux O/S နှင့်ပါတ်သက်သည့် အသုံးပြုနည်းများအားလည်းကောင်း အပျော်တမ်း wifi လွှင့်နည်းမှသည် စီးပွားဖြစ် wifi လွှင့်နည်းအထိ အသုံးပြု ကိုင်တွယ်နည်းအားလည်းကောင်း စသည့် များစွာသော အသိပညာအတတ်ပညာများကို သင်ကြားပြသပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
*** စတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည့်နေ့ 
13-12-2015 ( တနင်္ဂနွေနေ့ )
*** ဆက်သွယ်ရန် -
ဆရာ ညီနေမင်း - 094-7463414
ကိုဖြိုး - 082-3433929
မရွှေဇင်ဝင်း - 096-0744373
*** စာရင်းလာပေးရမည့် နေရာ - BANGKAE CONDO
ဖိကစင် 62/4 နှင့် 62/3 ကြားရှိ အမြင့်ဆုံး ကွန်ဒို တိုက်ခန်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)။ LOTUS BANGKAE လိုတက်စ် ဘန်ခဲအနီးနား၊ ဘန်ခဲဈေးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်အခြမ်း. ကွန်ဒိုသည် security card ဖြင့် ဖွင့်ရသည့်အတွက် အပေါ်ထပ်မှ ကျနော်တို့အနေဖြင့် လာကြိုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ မလာတတ်သည့် သူများလည်း ဖုန်းဆက် မေးလို့ရပါတယ်။ မြို့ထဲတွင်ဖြစ်သည့်အပြင် အားလုံးနှင့်နီးသည့်နေရာ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် လာရတာ အဆင်ပြေမည်ထင်ပါတယ်။ ကားဂိတ်နှင့်လည်း နီးပါတယ်။ အသေးစိတ် သိလိုသည့်သူများ မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
The Mall Bangkae, Lotus Bangkae ဘက်အခြမ်းမှ လာသောသူများ လိုတက်စ်ဘန်ခဲ တွင်ဆင်းပြီး လမ်းနည်းနည်းဆက်လျောက်လာပါ. လိုတက်မှာ ဆင်းပါက လမ်းညွှန်လွယ်ကူသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်. လမ်းဆက်လျောက်လာပြီး FAMILY MART ရှိသော လမ်းဘေးနားရှိ ဂိတ်အစောင့် ရုံရှိသော လမ်းကြားထဲမှ ၀င်လာပါ. ကွန်ဒိသို့ ရောက်ပါပြီ.
- ဘန်ခဲဈေးဘက်မှ လာသောသူများ ဘန်ခဲဈေး ကားမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းပြီး တံတားမှ တဆင့် ဘဘက်ခြမ်းသို့ ကူးလာပါ. ပြီးလျင် လမ်းနည်းနည်းလျောက်လာပြီး လမ်းထိပ်တွင် FAMILY MART ရှိနေသော လမ်းကြားထဲမှ ၀င်လျင် ကွန်ဒိုသို့ ရောက်ပါပြီ.
- ကွန်ဒိုသို့ လာရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.
Paye PhyoKyaw December 18, 2015 at 12:02 PM
Good ကောင်းပါတယ်အကို ကျေးဇူးပါ အကိုဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ (ပုသိမ်နည်းပညာ-www.patheinit.com)
Samsung Galaxy Y (GT-S5360) Rom
Computer သင်တန်းအသစ် (13.12.2015) ရက်နေ့မှစပြီး စာ...